Nagarik Shukrabar - गाईको तुजुक
सोमबार, ०५ असोज २०७७, ११ : १५
सोमबार, १३ माघ २०७६, ०१ : ०६ | शुक्रवार
नेपालका सकडमा गाईबस्तुको दादागिरी तपाईंले देख्नु भएको होला। तिनले गाडीहरुको गति कम गर्ने गरेको पनि नयाँ कुरा भएन। तर विकसित मुलुकका गाईहरुको तुजुकै बेग्लै ! तिनले गाडी होइन, सिधै रेल नै रोकिदिन्छन्।
पत्याउनु भएन ? स्कटल्यान्डको पहाडी भेगमा चल्ने रेललाई एउटा गाईले पूरै रोकिदिएको छ। टाढैबाट सिठ्ठी फुक्दा पनि कुनै हलचल नगरेपछि रेल रोकिन बाध्य भएको हो।
त्यसो त नेपालमा यस्तो घटना भएको भए गाईमाथिबाटै गाडी दौडिन्थ्यो होला तर त्यहाँ रेल रोकियो। रेल रोकिएको खबर मुख्य अड्डासम्म पुग्यो पनि र मुख्य रेल अड्डाले सर्वसाधारणलाई रेल ढिला गन्तव्यमा पुग्ने सूचनासमेत जारी ग-यो।
यता रेलमा भएका अधिकारीहरुले गाईलाई फकाउन दुई टोक्रो फलफूल, अन्य किसिमका खान्की र पेय टक्र्याएका थिए। यसपछि गाई खान्कीतर्फ लम्कियो र रेल सुचारु भयो।
पछि यो तस्बिरलाई ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गर्दै स्कट रेलले भनेको छ, ‘पूरै खान्कीको माग राख्दै अनसन बसेजस्तो देखेपछि हामीले पनि केही योगदान त दिनुप-यो भने खान्कीसहित उसको अनसन तोड्यौँ। यसले गर्दा रेल केही समय ढिला भएकामा सम्पूर्णसँग माफी चाहन्छौँ।’